Ukuthwala iiBlogs | Martech Zone
NgoLwesithathu, Julayi 5, 2006 NgoMgqibelo, ngo-Epreli 16, 2016 Douglas Karr
News.com -Thwala iiBlogs
Forbes.com -Ibhola eMySpace
Isibini samanqaku anomdla kuqhushumbo lweeblogi. Njengayo nayiphi na 'i-bubble', abantu sele bethetha malunga 'nokugqabhuka'. Into endiyithathayo kukuba uNick Denton akafumani 'i-bearish kwiibhloko', ufumana i-bearish kwiiblogi ezimbi njengomthombo wengeniso. Iiblogi ziya kuqhubeka nokukhula ngokuhamba kwexesha kwaye zidityaniswe kuyo yonke imiba yewebhu. Nangona kunjalo, njengayo nayiphi na iwebhusayithi, umxholo kufuneka ubengukumkani. Ukuba awubhali bhetele kunomfo olandelayo, abantu baya kudikwa kwaye bahambe.
Kwiinkampani ezinje ngoMnu Denton's ezisebenzisa iibhloko njengemithombo yengeniso, oku kuthetha ukuba yonke into ebhlog engenayo kufuneka ibe ngumbulali. Kukho umngcipheko omkhulu obandakanyekayo kwingeniso yokungcakaza yomxholo-ngakumbi xa kukho iibhiliyoni zamaphepha omxholo phaya.
Andiyiblogi yemali (andizukutya ukuba bendiyenzile). Endaweni yoko, ndibhloga ukunxibelelana nabahlobo, usapho kunye nabanye abaqeqeshi kumzi mveliso. Le yindawo yam yokwabelana ngeengcinga zam kwaye ndixoxe ngezinye iingcinga zabantu. Indinika ukuvezwa kwaye ndicela ingxelo kwabo ndibahloniphayo.
tags: I-bearish kwiiblogiblogkublogaforbesMySpaceNick dentonIbhola ye-myspace
Umntu wesine? Umntu wesihlanu? Umntu weGrama kunye nokuThengisa
Kutheni le nto imboni yemovie isilela, ukulandelelana